AVCHD Free Player: Sida loo Play AVCHD Files
File AVCHD waa qaab video-qeexidda sare in uu si weyn u isticmaala kaamirada digital on. Haddii aad qabto dhibaatooyin ka in dib ciyaaro files AVCHD on your computer ka, waxaad isku dayi kartaa ciyaaryahan AVCHD xirfadeed. Waxa kale oo aad u bedeli karaan faylasha AVCHD aad sidaas darteed waa socon ee aad PC ama ciyaaryahan dhisay-in warbaahinta. Si fudud u akhri wixii macluumaad dheeraad ah ka hooseeya.
Qaybta 1aad: Sida loo Beddelaan AVCHD Files
Qeybta 2: Sida loo Play AVCHD Faylal ay la Players AVCHD
File AVCHD An ma ah nooca file fudud ama sahlan in ay soo jiidaysaa oo la. Waxaad ku daawan kartaa oo kaliya kombiyuutarka media player ah, laakiin aan run ahaantii edit karaa ama wax ka qaban la. , Aad Tusaale ahaan ma waxa edit karaa in qaar ka mid ah qalabka tafatirka guud sida Kan sameeyey Windows Movie, Final Cut Pro ama iMovie. On top of in, waa macquul in aad ka soo dhoofsadaan faylasha gal Lugood maaraynta ama syncing la iDevices ah. Xalka ugu wanaagsan waa, sidaas darteed, si loogu badalo files AVCHD ee dabacsanaan dheeraad ah.
Si loogu badalo file AVCHD ah oo loo maqli karo la ciyaaryahan kasta ama ujeedooyin tafatir dheeraad ah, Wondershare ku Video Converter ( Video Converter u Mac ) waa aalad aad u waxtar leh. Waxa ay taageertaa dhammaan noocyada file caanka ah ee liisaska qaab wax soo saarka ay. Sidaa daraadeed, aad u bedeli karaan faylasha AVCHD in ay qaab video in aad jeceshahay doonaa wax kasta. Tallaabooyinka faahfaahsan waa sidan:
1. Download, rakibi iyo abuurtaan barnaamijkan.
2. Jiid-iyo-hoos u si toos ah files AVCHD ka tusaha deegaanka gal interface ka dibna riix Qaabka Output doorashadooda dheeraad ah oo ka soo menu hoos-hoos. Presets Waxaa sidoo kale filaayo in dhisay-in aad sahlo.
3. Mar haddii aad dhameyso, dhufatey badalo button si loogu badalo files AVCHD aad.
Qaab AVCHD waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican si loo hubiyo in files qeexitaanka sare aan la soo ciyaaray oo kaliya laakiin user ayaa sidoo kale heli karo gobolka adeegyada tahay wax waqti ah gudahood oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in ciyaartoyda AVCHD ugu fiican waa kuwa aan kaliya fahmi shuruudaha user, lakiin waxa ay sidoo kale ay awoodaan in ay hesho natiijooyinka ugu fiican u isticmaala ee arrintan la xiriira.
2 ciyaartoy AVCHD Bilaashka ah ee Windows
2 ciyaartoy AVCHD Bilaashka ah ee Mac
2 ciyaartoy AVCHD lacag la'aan ah macruufka
2 ciyaartoy AVCHD lacag la'aan ah android
Haddii aad jeceshahay in aad tijaabiso ciyaaryahanka boosaska badan ka sii warbaahinta in Radidiyaha files AVCHD aad PC Windows ka hawlgala, fadlan akhri on iyo isku day in qaar ka mid ah ciyaartoyda AVCHD awood badan hoos ku qoran.
On Windows PC, nooca ugu dambeeya ee Window Media Player (WMP) waxay awoodi doonaan inay taageeraan loo maqli karo ee AVCHD si dabiici ah soo gudbiyo. Haddii aad WMP ku guuldareysto inuu Radidiyaha files AVCHD ah, fadlan cusboonaysiiso WMP in nooca ugu dambeeya. Haddii kale, dooro ama ciyaaryahanka AVCHD aadka loo talinayaa in maqaalka.
: URL http://www.wondershare.com/video-player/
Wondershare Player waa ciyaaryahan aad u xoog badan iyo wejiyo warbaahinta. Intaa waxaa dheer, waxa uu ka ballaaran taageero qaab file, sidoo kale FREE inaad kala soo baxdo! Kale oo ka duwan loo maqli siman ee files AVCHD aad, waxaa kale oo ay bixisaa siyaada ah sida Cinwaan iyo taageero tracker dhawaaqa, sawir, abuuridda playlist iyo iwm Waxaad halkan kala soo bixi kartaa oo rakibi ciyaaryahanka.
Ciyaartoyda waa in ay halkan ku xusan waa kuwa in waxaa loogu talagalay sida baahida iyo dalabaadka ka mid ah dadka isticmaala ay. Shirkadaha iyaga oo taageeraya sidoo kale in la hubiyo in user helo adeegyada ugu fiican gudahood markii uu soo xeeladda ku qoray shirkadda sida ay sidoo kale hubin doona in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada tahay wax waqti ah gudahood oo dhan. Waxa kale oo hubin doona in kalsooni user la horumariyo oo ay ka helaan adeegyada ay yihiin kuwa ugu fiican ee jeer oo dhan. Marka ay timaado in Mac waa in la ogaadaa in ay soo socda waa qaar ka mid ah ciyaartoyda aan keliya oo ay bixiyaan adeegyada ugu fiican lakiin sidoo kale ka heli user ku soo jiidasho leh oo ku saabsan heerka taageero ee la xiriirta adeegga macaamiisha:
Horumarinta: BS Player Corporation
muuqaalada Key waxaa ka mid ah gobolka interface tahay horumarin ku taageera tiro badan oo ah qaabab ay ka mid yihiin AVCHD ku taal ma mid caadi ah oo dhan.
muuqaalada Key waxaa ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka adeegyada tahay in Hubi in ka dhigi lahaa in taageero macaamiisha ah waxaa la siiyaa waqti lahayn gudahood marka timaado arintaan oo laga cabsado madal
Macruufka waa mid ka mid ah dhufto ee ugu fiican in la hubiyo in videos AVCHD iyo sawirada la xiriira waxaa lagu daawan oo lagala soo bixi in qalabka Xararad. Ciyaartoyda AVCHD ugu wanaagsan ee lagu hoos ku xusan si aad u hubiso in adeegyada ay sii state of farshaxanka. Sidoo kale waa in la ogaadaa in files AVCHD kuwo aad u culus oo waaweyn oo cabbirka iyo sabab la mid ah qeexidda sababtay ma aha oo kaliya ciyaaryahanka ugu fiican laakiin ciyaartoyda iska caadi ah ma awoodaan inay ku ciyaaraan files, kuwaas oo si fudud sida ku qanacsan tahay. Si loo hubiyo in adeegyada ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah in arrintan la xiriira waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in ciyaartoyda in la soo sheegnay doonaa qeybtii dambe ee tutorial taas laga soo qaadan oo keliya, laakiin waa in sidoo kale user siiyo kubad uu si dhamaan ciyaartoyda in qoran yihiin u Mac sidoo kale Windows si loo hubiyo in ugu wanaagsan ee lagu helay hab ku jirta oo waafaqsan shuruudaha isticmaala.
muuqaalada Key waa naqshadda caato ah oo quruxsan oo ah ciyaaryahanka ugu shugri iyo ee u duuban si loo hubiyo in ugu fiican waxaa la siiyaa waqti lahayn gudahood oo dhan. Sidoo kale waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican oo loo isticmaali karaa in arrintan la xiriira.
2. VLC ee macruufka
Horumarinta: Video LAN
muuqaalada Key waxaa ka mid ah ugu wanaagsan iyo gobolka adeegyada tahay in la hubiyo in user ka dhigi lahaa helo ugu wanaagsan ee reer ciyaaryahanka marka ay timaado qaab AVCHD. Sidoo kale waa in la ogaadaa in marka laga reebo qaab AVCHD ciyaaryahanka sidoo kale sidoo kale taageertaa qaabab kale oo aan la garanayn.
Android waa mid ka mid ah dhufto ee ugu fiican oo loo isticmaalo mobile dunida. Sidaa darteed waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay telefoonka by doorashada ciyaartoyda hoos ku qoran:
Horumarinta: Media ciyaaryahan BS
muuqaalada Key waxaa ka mid ah u fiiriyaan ugu fiican iyo hawlaha la gundhig ay gudahood. Waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican oo ugu isticmaalay si weyn dunida.
muuqaalada Key waa qaabka ugu wanaagsan oo degdeg ah oo uu soo gundhig gudahood badhannada wajiyo oo aan si fudud oo kaliya in ay shaqeeyaan laakiin sidoo kale in la hubiyo in waayo-aragnimo user s wanaajiyey waqtiga ma gudahood oo dhan.
Taageerada waa habka ugu fiican in la hubiyo in user helo adeegyada waa in waqti iyo in ay dhacdo arin kasta oo dhibaatada la xalin sida ugu dhakhsaha badan si aad u hubiso in kalsoonida user aan la horumariyo oo kaliya in ay dhacdo a mar labaad user helo adeegyada shirkadda isla ciyaaryahanka in loo isticmaalay. Waxaa sidoo kale in la xuso in adeegyada ugu fiican ayaa sidoo kale ka kooban yihiin dhowr arrimood oo kale oo user ku raadiyaan si loo hubiyo in user ma aha oo kaliya helo adeegyada waafaqsan yihiin shuruudaha video ah waa laakiin sidoo kale wuxuu hubiyaa in ka user helo ugu fiican sidoo waqti lahayn gudahood oo dhan. Qaab AVCHD waa mid ka mid ah kuwaas oo loo weyn loo ma isticmaalo sida kaliya waxa ay ku egtahay kaamirada la ee ay soo Sony oo Panasonic iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user ma awoodi doonaan in ay helaan kala duwan ee adeegyada taageerada arrintan la xiriira. Si aad u hesho adeegyada ugu fiican waxaa lagula talinayaa inay dhammaan dadka isticmaala si ay u maraan adeegyada ka mid ah ciyaartoyda in lagu soo sheegnay ee qodobkan iyo waxa ay sidoo kale ka dhigi doonaa hubiyo in dadka isticmaala marna waa ay ka tageen, oo ay ka helaan adeegyada waa mid laga cabsado iyo gobolka of farshaxanka. By isticmaalaya ciyaartoyda hoos ku user wuxuu heli doona cad iyo sida ugu wanaagsan ee loo hubiyo in dhufto ee xiriirka ka dhexeeya waxa kale oo qaawan. Waxaa sidoo kale in la xuso in adeegga ugu habboon oo ah mid ka mid ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in user ma aha oo kaliya helo adeegyada ku jira line la OS, laakiin sidoo kale ay helaan taageero joogto ah in arrintan la xiriira.
> Resource > Video > AVCHD Free Player sida loo ciyaaro AVCHD Files